Eskişehir Beton Yolları İle Örnek Olmaya Devam Ediyor | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး26 EskisehirEskişehirသည်ကွန်ကရစ်လမ်းများနှင့်အတူစံနမူနာပြခဲ့သည်
17 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 26 Eskisehir, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ကတ္တရာသတင်းများ, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, တူရကီ 0
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကİnönüအများအပြားခြောက်သွေ့တဲ့နမူနာ, အဓိကအားဖြင့်မြူနီစီပယ်Eskişehirတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ကွန်ကရစ်နည်းလမ်းတွေနဲ့စတင်ပြီး, တူရကီ, အလမ်းများဦးစီးဌာနနှင့်ကတ္တရာသုံးဌာနခွဲအင်ဂျင်နီယာများ၏အမိန့်ဖြင့်မြို့တော်ဝန် Mansoor နှေးထံမှတူရကီမြို့တော်သိပ္ပံအလုပ်လုပ်ဖို့ကွန်ကရစ်လမ်းများအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုပေး၏ ။ ကွန်ကရစ်လမ်းဖောက်လုပ်မှုအပြီးတွင်ထိုအဖွဲ့သည် Metropolitan Municipality အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးAyşeÜnlüceမှအသေးစိတ်အချက်အလက်များရရှိခဲ့သည်။
Didim မြူနီစီပယ်၊ Ermenek မြူနီစီပယ်နှင့် Karaman အထူးစီရင်စုအုပ်ချုပ်ရေးအရာရှိများသည် Eskisehir တွင်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သောကွန်ကရစ်လမ်းများအားစစ်ဆေးရန် Ankara မြို့တော်စည်ပင်သာယာသို့ရောက်ရှိလာကြသည်။ တူရကီမြို့တော်မြို့တော်ဝန် Mansoor နှေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့၏နည်းဥပဒေသူတို့Eskişehir၌နေသောဖော်ပြထား, တာဝန်ဥပဒနှင့်အတူထက် သာ. ကြီးမြတ်တိုးလာနှင့်စီးပွားရေး၏ကွန်ကရစ်လမ်းကတ္တရာလမ်းအပေါ်အခြေခံပြီးသူတို့ကြောင့်အသက်ရှည်ဖို့တူရကီအတွက်ကွန်ကရစ်အလုပ်သင့်ရဲ့သွားရာလမ်းလုပ်ဆောင်ချင်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ Eskişehirတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ခင်းကို Maintenance နှင့် Seyitgazi နှင့်ဟန်အကြား 30 ကီလိုမီတာဧရိယာလည်ပတ်ခဲ့သူကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့လည်းအတိတ်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလဆောက်လုပ်ရေးကြည့်ရှုဦးစီးဌာနအရာရှိများ Repair သူမကြာခဏအသုံးပြုသောİnönü-Kandilli အကြားအရပ်ဌာန၌ကွန်ကရစ်လမ်းစဉ်ကိုအပြီးသတ်နှင့်မိုးသည်းထန်စွာတာဝန်ယာဉ်များ။
ကွင်းဆင်းလေ့လာမှုအပြီးတွင်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် Metropolitan မြူနီစီပယ်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးAyşeÜnlüceသို့သွားရောက်ခဲ့ပြီး Mansur Yavaş၏ညွှန်ကြားချက်အရ Ankara ၏အချို့နေရာများတွင်တိကျသောလမ်းဖောက်လုပ်မှုစတင်လိုကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ AyşeÜnlüceမှပြောကြားသည်မှာကွန်ကရစ်လမ်းသည်ကတ္တရာလမ်းများထက်ပိုမိုကြာရှည်ခံပြီးကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပြီး၊ မြှို့နယ်များအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားလုံးသည်အများပြည်သူအကျိုးအတွက်ဖြစ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
အတူ Eskisehir ကွန်ကရစ်လမ်းမကြီးဥပမာဖြစ်လာ 23 / 09 / 2019 ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကွန်ကရစ်လမ်းဖောက်လုပ်မှုစတင်ခဲ့သည့်Eskişehir Metropolitan Municipality သည်ငါတို့နိုင်ငံ၏အခြားမြို့များအတွက်စံနမူနာဖြစ်သည်။ ယခု Karaman အထူးပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် Ermenek မြူနီစီပယ်၏Aydın Didim စည်ပင်သာယာ၏အရာရှိများအပြီး ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Başmakasအိမ်တွင်းအတူကွန်ကရစ်ဘူတာရုံအဆောက်အဦးတစ်ခုကွန်ကရစ်လမ်းမကြီးလုပ်ငန်းအဖြစ်ပြုအဖြစ် path and Gelemen Walking Paths ပြုလုပ်ခြင်းတိမ်း Gelemen 27 / 05 / 2015 အကြားကွန်ကရစ်လမ်းများဆောက်လုပ်ခြင်း။ ဒေသဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်…
Raçစပိန်ရထားလမ်းထုတ်လုပ်သူက CAF, ရောမမြို့က Metro အတွက်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းဖြစ်ဆက်လက် 05 / 11 / 2012 Rome Metro သည်စပိန်ကုမ္ပဏီ CAF နှင့်5ယူရိုသန်းပေါင်းများစွာကို 15 အတွက်ခြောက်နှစ်အတွင်း 113 မြေအောက်ရထားများကိုဝယ်ယူရန်သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့သည်။ မြေအောက်ရထားသစ်များအသစ်ဖွင့်လှစ်ထားသည်။
Bursalılarတူရကီရဲ့စျေးအကြီးဆုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမျက်နှာပျက်ခြင်းရှိကြခံရဖို့ဆက်လက် 26 / 12 / 2016 Türkiye'nin en pahalı ulaşımı ile Bursalılar rezil olmaya devam ediyor :CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'dan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'ye sert tepki geldi! Sarıbal, "Türkiye'nin en pahalı ulaşımı ile…
Raçစပိန်ရထားလမ်းထုတ်လုပ်သူက CAF, ရောမမြို့က Metro အတွက်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းဖြစ်ဆက်လက် 05 / 11 / 2012 Roma Metrosu ,5yıl için altı set halinde 15 adet metro araç alımı için İspanyol firması CAF ile 113 milyon Euro üzerinden anlaşma imzaladı. Yeni metro araçları…
Raçစပိန်ရထားလမ်းထုတ်လုပ်သူက CAF, ရောမမြို့က Metro အတွက်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းဖြစ်ဆက်လက်
Sanliurfa, ဖြစ်ရပ်မှန်အင်ဖိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် Continues
Eskişehir, ရထားလမ်းစနစ်များကိုဒီဇိုင်းအတွက်, R & D နှင့်ထုတ်လုပ်မှုအခြေခံဖြစ်ရည်ရွယ်